नेपालगञ्जमा डेढ अर्ब बढीको बजेट पारित – Sadarline
सदरलाइन संवाददाता २० असार २०७८, आईतवार १६:१६
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाको आगामी आर्थिकवर्ष २०७८÷७९ का लागि प्रस्तुत वजेट पारित भएको छ । असार १० गते ९ औं नगरसभामा उपमेयर उमा थापा मगरले प्रस्तुत गरेको १ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख रुपैयाँको प्रस्तावित वजेट आइतबारको नगरसभाले पारित गरेको हो ।
वजेट पारित भएपछि मेयर डा. धवलशम्शेर राणाले चारवर्षको अवधीमा नेपालगञ्जमा विकास निर्माणले उल्लेख्य गति लिएको भन्दै यसमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुको साथ र सहयोगले मात्रै सफलता प्राप्त गरेको बताए । उनले नेपालगञ्जमा भ्रष्टाचार करिब निर्मुल पारिएको भन्दै मिलेर काम गर्ने अवस्थाले राम्रो काम गर्न सकेको बताए ।
सैनिक नेतृत्वसँगको आपसी समन्वयका आधारमा उप–महानगरपालिकाले प्रस्ताव पारित गरेको हो । नगरसभाले कर्मचारीहरुको बृत्ति विकास लगायतका आवश्यक निर्णय पनि पारित गरेको छ ।
नगरसभामा सुशासन समितिका संयोजक नरवहादुर विष्ट र साझेदारी विकास कार्यदलका संयोजक कार्यपालिका सदस्य कौशलकुमार धोवीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । नगरसभाले एडिबीको थप परियोजनाका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नगरसभामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख उपसचिव गोर्खवहादुर थापा, योजना प्रमुख वज्रभुषण झा, जिन्सी शाखा प्रमुख विमल गुरुङ, जनस्वास्थ्य निरिक्षक विनोद विक, लेखा शाखाका दुर्गा पौडेल, सुभास थापा लगायतका कर्मचारीहरुलाई मेयर डा. राणा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिरालाल रेग्मीले सम्मान गरे । सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई समेत सम्मान गरिएको प्रशासन प्रमुख राजन केसीले जानकारी दिए ।
नेपालगञ्ज : लुम्विनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ताका लागि हालै पठाएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पुनर्लेखन गर्न बाँकेका पत्रकारहरुले माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल मार्फत् लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघ बाँकेका अध्यक्ष […]